Uyenza njani iMaphu yaBanye abadlali beMinecraft
Ukuyila imephu yesiko eneenkcukacha, yenza imephu ilungelelaniswe kakuhle nabadlali bakho beMinecraft: kufanelekile ukuba konwabe ngokwaneleyo, kungabi lula okanye kube nzima, kwaye kuchazwe kakuhle. Qhubeka ufunda ukuze ubone indlela yokuseta imephu kunye nokusebenzisa ilitye elibomvu ukulawula i-adventure.
Ikhaka lokuqala lezinja
Ngokukodwa kwimephu zokuzonwabisa okanye kwimephu zokusinda, qiniseka ukugqibezela ezi zenzo:
Misela umhlaba ukuba uzale. Le ndawo yile apho bonke abadlali abatsha baqala ukuvela. Nika uhlobo oluthile lweplaza okanye iqonga, emva koko usebenzise iimvuyeyyiya embindini wayo ukuyiphawula.
Misela imigaqo yomdlalo. Inkqubo ye-Umthetho womdlaloumyalelo ubalulekile ekumiseni useto lwehlabathi. Iimephu ezininzi zesiko zenza ukubaGcinaInventorylawula, kwaye ungasebenzi imigaqo efanadoDaylightCycle,DoMobSpawning,yenza iTileDrops,DoFireTick, kunyemobGcina.
Nika abadlali inkululeko efanelekileyo kunye nezithintelo. Abadlali kufuneka bakwazi ukudlala imephu yakho yesiko, kodwa ungabavumeli ukuba baphule ubuchwephesha bomdlalo! Khumbula ukuba yonke ibhloko eMinecraft inokutshatyalaliswa.
Ukuthintela umhadi wakho owenziwe ngokuqaqanjelwa okanye i-arcade ekuphazanyisweni, ungasebenzisaumgaqoukuyalela bonke abadlali kwimowudi yeAventure - le ndlela ithintela abadlali ekuqhekezeni iibhloko ngaphandle kokuba banezixhobo ezifanelekileyo, ukuze ukhethe ngokuthe ngqo ukuba zeziphi izixhobo abavunyelwe ukuba nazo.
Umandlalo kunye nezithintelo zenza iindonga ezilungileyo kwiimephu zendlela engezizo ezokuzonwabisa kuba azinakonakaliswa okanye zihanjiswe ngabadlali, ngaphandle kokuba umdlalo ukwimowudi yokuYila.
Yakha olo seto kunye nemiyalelo. Abadlali kufuneka bazi ukuba bakuphi, kufuneka bayisebenzise njani imephu, kunye nento abaza kuyenza ngokulandelayo.
Ukuseta umdlalo, ngokuthethileyo, yinxalenye elula- kuya kufuneka wenze kuphela imiyalelo embalwa kwiNgxoxo iwindow, usete yonke imigaqo kunye neemowudi ezichazwe kuluhlu olwandulelayo. Emva kokuba abadlali beqalile kwimephu yakho yesiko, nangona kunjalo, kuya kufuneka ukhokele isenzo sabo ukuvelisa iziphumo zokuzonwabisa. Yilapho intliziyo yelitye lakho elibomvu liqala ukusebenza.
Ukulawula i-adventure nge-redstone
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-redstone yenzelwe ukudibanisa igalelo kwimveliso-kwimephu yesiko, igalelo zizenzo zabadlali bemephu. Njengoko abadlali beqhubela phambili kwimephu, ungasebenzisa i-redstone ukulawula i-adventure ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanya
Yazisa ngemiceli mngeni enikwe ngelitye elibomvu: Umzekelo, hlanganisa ezinye iipiston ezinamathelayo kwiluphu, evelisa iseti yeebhloko ezihamba rhoqo onokwenza ukuba abadlali bagxume banqumle okanye baphephe. Unokusebenzisa iibhloko zomyalelo, okanye izixhobo eziqukethe amaqanda e-monster, ukubiza iintshaba nanini na xa abadlali besondela.
ungathatha i-advil nge-vicodin
Lawula ii-minigames: Ngaba ufuna umdlalo ube nenkqubo yokufumana amanqaku? Ngaba ufuna ukuba iminigame yakho igqibe ukubala ukumisela imiceli mngeni kunye nembuyekezo ebapha abadlali? Ngaba uyafuna iipiston ukuba zilahle umdlali ophulukeneyo? Uninzi lwee-minigames ezinje ngezi zisebenzisa ilitye elibomvu kancinci emfihlekweni, njengeesekethe ezilawula iindlela, okanye zokubala ezirekhoda amanqaku abadlali.
Sebenzisa amanqaku ebhodi kunye nezinto eziguquguqukayo: Ungasebenzisa ii-latches zememori okanye iibhodi zamanqaku ukugcina umkhondo wenqanaba lemephu kunye nabadlali, ukusuka kumanqaku ukuya kwinkqubela phambili ukuya kwimivuzo engavulwanga. Olu hlobo lokulandela umkhondo luluncedo ekudaleni uvakalelo lokugqitywa kwabadlali, okoko nje ubabonisayo inkqubela phambili yabo endleleni.
Yenza iibhloko ezikhohlisayo kunye nezinto ezinemiyalelo: Mhlawumbi ufuna ukuba abadlali balwe nesigcawu esikhwele i-zombie ngempilo kathathu okanye ufuna iibhloko kwaye ugcine isifuba singaveli naphi na kuseto oluthile. Ungakwenza konke oku ngokudibanisa iibhloko zomyalelo kwiipleyiti zoxinzelelo okanye abanye oomatshini kwaye usebenzise umyalelo wokubiza iibhloko okanye izinto ezithile.
Iziphumo zecrereograph kunye neziganeko: Unokuqhagamshela ilitye elibomvu elijikeleze yonke imephu ukulawula ubume bayo kunye nenkqubela phambili.
I-claritin ithamo yabantwana abasabhadazayo
iswekile yegazi ngaphezulu kwama-300
ide kangakanani i-monistat 1 isebenze
Ngaba ibuprofen kunye ne-acetaminophen zingathathwa kunye